बिन्ती छ आफ्नो सपना र पार्टीको लागि देश र जनतालाई नकुल्चौ : अमृत वोस्ती::Nepal's Online News Portal
बिन्ती छ आफ्नो सपना र पार्टीको लागि देश र जनतालाई नकुल्चौ : अमृत वोस्ती
“हाम्रा सन्ततिको भबिस्य जोखिमा”
कसले बनाउने यो देश कस्का लागि बानाउने?? हामी कैले सम्म यो वाद त्यो वाद बोकेर कहिले सम्म हिडने ?? कति सम्म राज्नितिको नाममा आफ्नो अमुल्य समय खर्चिने?
त्यो भनेर कुद्दा कुदै आफुलाइ बिर्सियौ हामिले राजनीतिमा आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भबिस्य अन्धकार बनायौ। अब पनि त्यो सस्कार कैले हुने अन्त्य?
पहिला आफ्नो सन्ततिको भबिस्य उज्वल बनाएर मात्र देश उज्ज्वल हुन्छ भन्ने बुज्ने कैले हामिले रोल्पा , रुकुम मुस्ताङ का आमा बुवाको अँखाको आँसु पुछ्ने कैले?? औषधि कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने त्यो ठाँउमा कैले??
जन्मिदै दलको नारा लियर जन्म्यौ हामी त्यहि सस्कारमा हुर्कियौ र कहिले कसको पछि त कहिले कसको पछि दैउडा दैउडै समाज जो लागि कै गर्न सकिएन।
हामिले हाम्रो र भाबी सन्तान्को भबिस्य कति अन्योलमा पार्यौ। आफ्ना सुन्दर सपना पाटिको झोला र नारामा कुल्चिए कति घरबार बिहिन भए कतिका सिन्दुर पोते त कतिको आमाको न्यानो काख खोसियो।
बिन्ती छ आफ्नो सपना पाटिको लागि नकुल्चिउ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिनमा हामी हरेक बाहाना र पल पलमा नबिकउ ।हो हाम्रो गल्ति तेहिनिर हो। हाम्रो गल्तिले हाम्रा भाबी सन्तानले दुख पपाउनेछन , समाजले दुख पाउनेछ तपाईं , हामिको गलत निर्णयले ती निर्दोष नब आगन्तुक पाउनालाइ एउटा स्वच्छ वातावरणको शिर्जना हुन बाट बन्चित नगरौ ।
अबको चुनाबले हाम्रो मतले अन्धकारलाई हटाइ उज्यालो तर्फ लैजाओस
अब हामी अन्तिम निर्णयमा छौ हामी हाम्रा सन्तानको र आफ्नो बाटो , समाजको बाटो कोर्ने अन्तिम घडीमा छौ।
नयाँ र पुराना पुस्तालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढौ
यो देशको समृद्धि बिकास गर्ने कि नगर्ने हाम्रो हातमा छ। परिवर्तनको लागि इतिहास हेरौ हिज बेलायत , जापान , कोरियालाई सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज हात तिनै देश सङ थापिरहेको छ । कसरी भयौ हामी माग्नी कस्ले बनायो माग्नी हामिलाइ??
इतिहास र बर्तमान हेरौ खबरदारी गर्यौ ।अब बुझौ , उठौ र आ आफ्नो ठाँउ बाट उठउ
आ – आफ्नो ठाउमा जो सक्षम असल र समाज र देशका लागि इमानदार छ उसैलाइ रोज्यौ
जुन हाम्रो देश नेपालमा लोकतन्त्र लाई सस्थागत गर्दै जनताको सार्बभौमसत्ता पर्ती इमानदार बनोस
स्याङ्जा चापाकोट 1 हाल शंकर देव क्याम्पस ने बि संघ नेता